किन लगाइन्छ साउनमा हरियो चुरापोत, कपडा र मेहन्दी ? | Sagarmatha TV
किन लगाइन्छ साउनमा हरियो चुरापोत, कपडा र मेहन्दी ?
काठमाडौं – आजबाट साउन महिना सुरु भएको छ । साउनको सुरुवातसंगै अहिले अधिकाशं महिलाका हातमा मेहन्दी र रंगीबिरंगी चुराले सजिएको देख्न सकिन्छ । त्यसमाथि नेपाली हिन्दु नारीहरुकालागि साउन विशेष महत्वको महिना भएकाले पनि यो महिना सुरु हुन नपाउंदै महिलाहरु रंगीन हुन थालेका हुन् ।